Raha te hiverina amin'ny fitiavana amin'ny mpiara-miasa aminao ianao dia ataovy izao - Fifandraisana
Raha te hiverina amin'ny fitiavana amin'ny mpiara-miasa aminao ianao dia ataovy izao
Fantatrao ve ny 'mangidihidy fito taona'?
Raha ny fahitana azy dia misy ifandraisany amin'ny sarimihetsika iray misy an'i Marilyn Monroe, izay nihena ny fifandraisan'ny mpivady taorian'ny fito taona.
Ny psikology sasany dia mino fa mitaky faharetana eo ho eo ny fifandraisana iray hanimba ny fahasambarana toy ny volan-tantely hatramin'ny fahasosorana sy fanipazana kiraro.
Saingy, raha ny marina, miankina amin'ny olona voarohirohy sy ny tanjany tokoa izany.
Ny olona sasany dia afaka miara-miaina anaty fahasambarana mirindra mandritra ny am-polony taona maro, fa ny sasany kosa manomboka miforitra ny endrik'izy ireo rehefa afaka roa taona.
Ny fifandraisana dia mitaky asa, fanoloran-tena ary fikolokoloana mba hahombiazana, saingy maro ny olona no mihevitra fa raha manomboka milay ny fahatsapany voalohany dia midika izany fa vita ny fiaraha-miasa.
Tsy voatery ho izany no izy.
Tsy miova, mitombo, mivoatra hatrany ny olona… ary noho izany dia tsy maintsy miova ny fifandraisana ary mivoatra miaraka amin'izy ireo.
Raha manahy ianao fa mety hanana izany latsaka noho ny fitiavana miaraka amin'ny vadinao, na vadinao na mpiara-miasa maharitra aminao, ity misy torohevitra vitsivitsy ho anao.
Fifandraisan'ny Wax sy ny fihenan'ny, Ebb ary ny onja
Joni Mitchell indray mandeha dia nilaza zavatra tao anaty tafatafa iray izay tena marina tokoa raha resaka fifandraisana maharitra no resahina.
Namaky teny nalaina tao amin'ny magazine Esquire izy izay nilaza hoe: “Raha mila famerimberenana tsy misy farany ianao, dia mitadiava olona maro samihafa. Raha mila karazana tsy manam-petra ianao dia mijanona amin'ny iray. ”
Misy dikany izany rehefa tena mieritreritra an'io ianao.
Rehefa mampiaraka ny olona, ​​dia mitafy ny aloany ho an'ny tenany tsara indrindra sy mahafinaritra.
Manana tantara mahatalanjona holazaina izy ireo, fomba fanao manintona kely ary fihetsika mahasarika sy manintona ny zava-kendren'ny fitiavany…
… Fa rehefa lasa izay rehetra lasa, ary mamorona fifamatorana akaiky kokoa ny olona, ​​tena tsy misy ifandraisany intsony ireo tetika ireo.
Fa kosa, fifandraisana akaiky kokoa no nivoatra: ny iray izay anehoan'ny lafin-javatra marim-pototra sy marefo kokoa, ary marin-toetra kokoa izy ireo amin'ny zavatra tsapany, fa tsy manandrana manao fampisehoana tsara hitazomana ny hafa liana.
Tsy mifandray matetika amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay foana izahay, indrindra rehefa samy manana ny olany manokana na krizy manokana izy ireo.
Ny sasany mety misy fiatraikany amin'ilay olona fotsiny, ary ny sasany mety hisy fiatraikany amin'ny fifandraisana, toy ny fahasahiranana ara-bola na aretina lehibe.
Ny fihetsem-po koa dia mihena ary mandeha, ary tsy 'mandeha' foana.
Raha miady mafy amin'ny fahasarotana ara-pientanam-po ny mpivady iray, dia mety tsy hahaliana azy ireo mandritra ny fotoana kelikely, izay mety hahatonga ilay iray hafa ho tsinontsinoavina na holavina tanteraka.
Eo no manomboka ny fifandraisana mazava sy malalaka ...
Miresaka momba izany
Ity dia zavatra iray izay naverimberina imbetsaka teto amin'ity tranonkala ity (sy ny maro hafa), fa miverina indray: ny fifandraisana no lafiny tena ilaina amin'ny fifandraisana rehetra .
Matetika kokoa noho ny tsy izy, be ny fahasarotana azo hanamaivanana - na ialàna mivantana mihitsy aza - raha miresaka fotsiny ny olona amin'ny fomba malalaka sy marina momba ny zava-mitranga amin'izy ireo.
Ny fahatsapan'izy ireo, ny toerana misy azy ireo eo amin'ny fifandraisana ary koa eo amin'ny fiainany manokana, ny asany, ny haavon'ny fahafaham-po ankapobeny, sns.
Betsaka no tsy mifidy ny hiresaka ny olan'izy ireo amin'ireo mpiara-miasa aminy satria matahotra izy ireo fa hihena ny mason'ilay olon-kafa, indrindra raha sahirana amin'ny fahasarotana ara-pihetseham-po na ara-tsaina izy ireo.
Raha misy fiovana lehibe mitranga, fa ny roa tonta te-hijanona ao amin'ny fifandraisana, dia mila misy fifampiraharahana.
Hevero ho toy ny famerenana sy fanavaozana ny fifanarahana ity: miova ny toe-javatra sy ny olona, ​​ary mety mila miova koa ny masontsivana.
Raiso an-tsaina ny fivoaran'ny tena manokana, ny fanovana asa, ny epiphanie ary ny safidinao, avy eo mipetraha ary mifanakaloza hevitra momba izay mety indrindra ho an'ny andaniny roa.
Izany dia mety hiatrika ny zava-drehetra manomboka amin'ny fikatsahanao manokana ka hatramin'ny andraikitry ny ankizy sy ny be antitra, na mety hoe miaraka amin'ny mifindra any amin'ny toerana hafa miaraka.
inona no dikan'ny hoe voatokana
Ny lakileny dia ny famerenana indray fifamatorana, ary mifampatokisa fa mifanatrika eo ianareo, na dia sarotra aza ny raharaha.
Ny firesahana momba an'io zavatra rehetra io dia mety hahasadaikatra, na hafahafa aza, indrindra raha ianao no karazana hitazomana ny fihetsem-ponao ho anao, fa zava-dehibe tokoa ny manokatra sy miresaka amin'ny namanao momba ireo zavatra tena mila resahina.
Raha mahamenatra anao ny miresaka azy ireo mifanatrika dia manorata taratasy. Na mailaka.
Na inona na inona ilaina hanokafana ny fifanakalozan-kevitra sy hamahana ireo olana izay mety ho efa ela be fety.
Aza hadino ny antony niatrehanao an'ity olona ity
Rehefa elaela no niarahanao tamina olona iray, ny fahazarana kely sy ny fahaizan'izy ireo izay hitanao fa tia anao dia mety ho tonga tampoka… mahasosotra tsy mampino.
nandritra ny dingana honeymoon , Ny hormonina sy ny haavo ara-pihetseham-po ataontsika dia manakana ny karazana fahasosorana isan-karazany, saingy rehefa afaka kelikely, ny feon'izy ireo mamoaka granola amin'ny sakafo maraina dia mety hamela anao hanakona azy ireo amin'ny toaster.
Ny fehezan-teny hoe 'mahazatra dia miteraka fanamavoana' dia tena marina avokoa.
Izao dia ny mety ho fahatsapan'ny olon-tianao ny fomba mitovy aminy aminao.
Tadidinao ve ny momba ny serasera teo aloha? Ie, izany. Rehefa tsy miresaka momba ireo zavatra manelingelina antsika isika, na dia zavatra toa tsy misy dikany aza, dia mitombo ny lolom-po.
Mandra-pahatongan'ny farany ianao dia manakaiky ny fipoahana izay tadiavinao misaraka satria izy ireo dia namono mafy ny kafe tao aminy imbetsaka loatra.
Ity no fotoana tokony hahatsiarovanao ny antony nitiavanao azy ireo voalohany.
Jereo indray ny sora-tanana taratasy fitiavana , mailaka, hafatra, sms, sns. hatramin'ny fotoana nahitanao voalohany, ary tadidio ny fientanam-po kely nahazoanao rehefa nahalala an'ity olona ity ianao.
Inona no nahatonga anao ho lavo tamin'izy ireo? Ny tsikin'izy ireo ve? Ny fihomehezan'izy ireo? Ny hatsaram-panahin'izy ireo?
Voasaron'ny fahalalan'izy ireo tamina lohahevitra manokana ve ianao?
Nahavita zavatra romantika tsy mampino ve izy ireo ka nesoriny fotsiny ny tongotrao?
Ireo no fahatsiarovana mamakivaky ny triatra rehefa taitra amin'ny torimaso ataon'ny mpiara-miasa amintsika isika, na rehefa mamoritra ny atin'akanjony isika rehefa mifampiraharaha amin'ireo ankizy mivazavaza.
fanontaniana mampieritreritra anao mafy
Raha te hanana fifandraisana sambatra sy feno ianao, apetraho ireo tanjona 9 ireo
Zavatra 10 tokony hataonao eo amin'ny sehatry ny fifandraisana
Mankasitraka ny tsara
Azo antoka fa mety misy zavatra maromaro momba ny sakaizanao izay mahasosotra anao indraindray, fa ahoana kosa ny zavatra mahatalanjona rehetra ataon'izy ireo?
Raiso ny diarinao (na taratasy kely, zavatra hanoratanao) ary manaova lisitr'ireo zavatra tianao rehetra momba an'io olona io.
Manome anao ny dite na kafe anao araka ny itiavanao azy amin'ny maraina ve izy ireo nefa tsy angatahina hanao izany?
Manana fironana haka ve izy ireo tsy ampoizina mahaliana rehefa mivoaka miantsena izy ireo?
Moa ve izy ireo mazoto miasa am-pitiavana, amin'ny fangoraham-po malefaka ary amin'ny fikarakarana marina?
Manao ahoana izy ireo miaraka amin'ireo namanao biby?
Rehefa manao an'io ianao dia mety hahita zavatra taonina izay noraisinao ho zava-poana, ary mahatsapa zavatra mahatalanjona sasany momba ilay olona nofidinao handanianao ny fiainanao.
Ankehitriny rehefa nanao lisitra mahafinaritra ianao amin'ireo zavatra mahafinaritra rehetra tianao amin'ny mpiara-miasa aminao, dia ampahafantaro azy ireo fa mankasitraka azy ireo ianao.
Tsy ny rehetra mandeha indray mandeha, satria mety hahatonga azy ireo tsy hahazo aina izany, fa rehefa mety ny fotoana hanaovana izany.
Toy ny rehefa omen'izy ireo ny kafe maraina ianao: raiso ny tanany na omeo fefy izy ireo, ary ampahafantaro azy ireo fa tena mankasitraka an'io fihetsika kely io ianao, ary tsy raisinao ho zava-poana velively.
Jereo avy eo mamirapiratra izy ireo.
Avelao ny fanantenana sy lolom-po
Isaky ny mifanerasera ny olona roa dia tsy maintsy misy karazana fifandirana indraindray.
Mety misy zavatra kely miteraka fahasosorana amin'ny fotoana maharitra - toy ny tsy fahaizanao mitaky ny ba kiriny maloto eny ambonin'ny tany - na mety misy olana matotra kokoa, toy ny raharaha iray, na fandaozana vetivety noho ny olanao manokana.
Averina indray fa zava-dehibe ny miresaka momba ireo zavatra ireo, ary mifantoka amin'ny famelan-keloka.
Olona ny manao diso, ary meloka isika rehetra satria nandratra, diso fanantenana ary nahatezitra ny hafa satria nifantoka tamin'ny hadisoantsika manokana isika fa tsy tena nihevitra ny fiantraikan'ny zavatra ataontsika eo aminy.
Ao anatin'ny tetik'asa lehibe, ny famelana ny alahelo sy lolom-po dia fanalahidin'ny fifandraisana mirindra.
Betsaka amintsika no manana fanantenana ny amin'ny “tokony” tokony hiarahan'ny mpiara-miasa amintsika, ny endrika tokony “hisehoana” eo amin'ny fifandraisana… fa oviana no tena nitaratra ny zava-misy ny zavatra antenaintsika ?
Miova sy mitombo be ny olona ka mety ho olona samy hafa tanteraka izy ireo manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny ampitso.
Ilay olona miaraka aminao izao dia tsy mitovy amin'ilay nihaonanao, ary misaotra ny lanitra amin'izany, raha tsy izany dia nijanona izy ireo.
Toy izany koa, ny fiarahanao miasa dia mety handalo fanovana maro raha miaraka ianao.
Mety mila mila mamerina mamaritra ny fari-pifandraisan-doha ianao mba handrosoana amin'ny fomba hahatonga ny tsirairay hahatsapa ho afa-po.
Ny fifandraisana monogamous dia mety hanjary polyamorous, na ny mifamadika amin'izany. Ny fiovana hormonina (na voajanahary na amin'ny alàlan'ny fifindran'ny lahy sy ny vavy) dia mety hisy fiatraikany fifandraisana akaiky ao anatin'ny fifandraisana , ka izany ny faritany mila fifampidinihana ihany koa.
Raha tsy manana fanantenana ianao dia tsy ho diso fanantenana.
Aza mitsahatra mifampiresaka momba ny filan'ny tsirairay avy, ary mifanohiza amin'ny dian'ny fanahy tsirairay avy arak'izay tratry ny herinao, ary mety ho gaga ianao amin'ny fahafinaretan'ny fifandraisanareo.
Mametraha tanjona kendrena hiaraha-miasa
Fitarainana lehibe iray ananan'ny mpivady maharitra maro dia ny tsy fiarahan'izy ireo miasa manatratra tanjona iraisana.
Ny sasany miasa mafy mividy trano, na mitaiza zaza, fa tsy voatery ho kaopy dite ho an'ny tsirairay izany.
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fandaniana fotoana miaraka, ny fanaovana zavatra mahafinaritra, ary ny mipetraka eo ambony sezalava fotsiny, mijery fahitalavitra ary tsy mifampiresaka na mifampiresaka.
Mitadiava fomba hirotsahana indray miaraka amina tanjona na tetik'asa izay samy mahaliana anao.
Inona no itovizanareo roa?
Inona no tanjona na tetik'asa azonao manokana fotoana iarahana?
Moa ve ianareo roa nanonofinofy ny hamboly zaridaina mahafinaritra? Ianao ve dia mpilalao sarimihetsika mazoto? Tianao ve ny mandeha?
Mipetraha ary miresaka momba ny zavatra sasantsasany izay tianareo roa hatao, ary avy eo mitady zavatra ezahana harahina.
Hamarino tsara fa mahafinaritra izany, fa tsy ho tetik'asa hiteraka fihenjanana sy fahasosorana be aminao, ary avy eo fantaro ny dingana ilaina hanaovana azy.
Ny fananana tetikasa toa izao dia hahafahanareo roa hifanerasera indray. Hanana angovo vaovao ianao hitodika mankany aminy, ary tsy maintsy ihodinanao ny sasany amin'ireo hazavana vaovao ho amin'ny fifandraisanao manokana.
Izay fiaraha-miasa maharitra dia mety hianjera amin'ny lalan-droa, miaraka amina mpiara-miasa hiafara amin'ny fahatsapany ho toy ny mpiray tampo na mpiray trano aminy indraindray. Indraindray mandritra ny fotoana maharitra.
Farany, ny lakileny dia ny hitadidy fa ny namanao dia olombelona mahatalanjona, ary tianao ny mandany fotoana miaraka amin'izy ireo noho ny antony.
Olona mahalala anao anaty sy ivelany ity. Nijoro teo anilanao izy ireo nandritra ny fotoan-tsarotra, nizara ny hafalianao ary koa ny alahelonao, ary nanaiky anao tahaka anao.
Raha samy miezaka mafy ianareo mba hiseho mifanatrika, ary miezaka ny hifankahita toy ny olona tsy manam-paharoa sy mahafinaritra, dia mety tsy ho tadidinao fotsiny ny antony nitiavanao azy nanomboka: mety hahita zavatra vaovao mahatonga anao hilatsaka ianao tiavo indray.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hitiavanao ny olon-tianao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
tena te-hiverina amiko ve ny taloha?
izay tokony hatao, rehefa leo ny ao an-tranonao
tsy ampy ho azy ve aho
ahoana ny fomba firesaka amin'ny olona maditra